Zvikamu zvisingapfeki zvemidziyo inofambisa pasi
SWMC inopa huwandu hwakazara hwezvipfeko zvisingagadziriswi zvemhando dzose dzemichina yepasi inoshandiswa kumigodhi, kuvaka, kurima nezvimwewo. Sezvakaita Excavator, Bulldozer, Loader, Backhoe, Scraper, Crusher nezvimwe zvakadaro.
Zvikamu zvinopotera zvinosanganisira kukanda zvidimbu zvakaita semazino ebhakiti, adapta, chivharo chemuromo, chidziviriro, ripper shank nezvimwe uye zvikamu zvakaumbwa senge mazino ebhakiti akaumbwa, kucheka, mashizha egiredhi, chikamu, magumo, nezvimwewo uye zvakare zvikamu zvinopfekwa senge. Chocky mabara, mabhatani ekupfeka, chromium yakasanganiswa kupfeka ndiro nezvimwewo uye zvikamu zvakaenderana sepini, washer, mabhaudhi uye nzungu nezvimwe.
SWMC ine chikwata chakasimba chehunyanzvi mumakore gumi, uye isu tinokwanisa kugadzira zvinhu zvinozadzisa zvinodiwa nemapurojekiti evatengi vedu.
Yakakwana mhando yekutarisa sisitimu, uye yakazara yakazara zvivakwa zvepamberi, senge Component yekuongorora muchina, Impact Machine, Tensile Simba muchina nezvimwe.
Ruzivo rwakapfuma rwekuita bhizinesi reOEM/ODM, tinogona kugadzira zvinhu semadhirowa nemasampuli kana uine chaunoda.
Kutonga kwakanaka, nguva pfupi yekuendesa uye yakakura mushure mekutengesa sevhisi.
Zvikamu zvikuru zvinodzivirira kupfeka zvinopihwa:
Weld pane Adapter
Imwe kona yebhaudhi
Zvakapfuura: SWMC-TY160-Simba kupatsanura dzimba
Zvinotevera: Pombi yegiya